Android 11 ပါသော HTC U8.0 တွင် Bluetooth 5.0 ရှိမည်ဟု HTC ကအတည်ပြုသည် Androidsis
Elvis bucatariu | | HTC က, Android ဗားရှင်း
ဂူဂဲလ်၏မိုဘိုင်း operating system သစ် Android 8.0 "O", ၎င်း၏ပစ်လွှတ်ရန်အလွန်နီးကပ်သည်နှင့်၎င်း၏ရောက်ရှိနိုင်ပုံရသည် အချို့သောစက်ပစ္စည်းများ၌ Bluetooth 5.0 အတွက်အထောက်အပံ့ကိုဖွင့်နိုင်သည်.
Android သုံးစွဲသူများသည်များစွာသောပမာဏမှအကျိုးခံစားရမည် အင်္ဂါရပ်အသစ် Android Device အသစ်များသို့၎င်းတို့၏ကိရိယာများကို update လုပ်သောအခါ၊ ယခု HTC ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် U8.0 သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစမတ်ဖုန်းအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသုံးစွဲသူများအားလုံးကိုအသိပေးလိုက်သည် ဘလူးတုသ် ၅.၀.
"မိုဘိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲဟာ Bluetooth 5.0 ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ HTC ကနေနောက်ထပ် firmware update တွေမလိုအပ်ပါဘူး" ဟုကုမ္ပဏီကမကြာသေးမီက blog post တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
"Android O ရောက်ရှိသည့်အခါကမ္ဘာအနှံ့ရှိ HTC U11 ပိုင်ရှင်များအားလုံးသည် Bluetooth 5.0 ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ "
HTC U8.0 အတွက် Android 11“ O” ၏နောက်ဆုံးသတင်းကိုမသိရှိရသေးသည့်နေ့စွဲရှိသည်
Android terminals အနည်းငယ်သာသည်နောက်ဆုံးပေါ် Bluetooth 5.0 နည်းပညာများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 +အသစ်အဖြစ် OnePlus 5, Sony Xperia XZ ပရီမီယံ နှင့် Xiaomi က Mi 6။ ယခု HTC U11 သည်ဤအုပ်စုငယ်သို့မကြာမီဝင်ရောက်တော့မည်။
HTC က၎င်းကိုယုံကြည်သည် Bluetooth 5.0 အထောက်အပံ့သည်သုံးစွဲသူများ၏မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိပြီးနောက် Android 11 update ကိုလက်ခံရရှိသည့်ပထမဆုံး HTC စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့် U8.0 စက်ရှိသူများ။
ယခုအဘို့ယုံကြည်သည် Android 8.0 ကို Google Pixel နှင့် Nexus ထုတ်ကုန်များ၌သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင်စတင်မည်သို့သော် HTC သည် HTC U11 အသုံးပြုသူများသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရရှိနိုင်ကြောင်း၎င်း၏ကြေညာချက်တွင်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာမယူသင့်ပါ။ ယခုအချိန်တွင် HTC U11 သည် Android 7.1 Nougat ကိုအသုံးပြုထားသည်။
Fuentes: HTC က
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Android 11 ပါသော HTC U8.0 တွင် Bluetooth 5.0 ရှိမည်ဟု HTC ကအတည်ပြုသည်